Ny fihantonan'ny fifanekena momba ny asa. - FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
Mandritry ny fanatanterahana ny fifanekena momba ny asa dia mety hitranga ny fihantonan’izany. Koa ireto ny tranga iraikambin’ny folo (11) voalazan’ny Lalana mihefy ny asa.
Ireto ny antony mampihantona ny fifanekena, sy ireo antony mahatapaka azy:
Fotoana hiantsoana ny mpampiasa eo ambany faneva,
Fotoana anaovan’ny mpiasa ny raharaha miaramila izay tsy maintsy ataony,
Fotoana tsy iasan’ny mpiasa noho ny aretina mahazo azy, izay voamarin’ny, mpitsabo, fotoana izay voafetra ho enim-bolana.
Afaka manapaka ny fifanekena ny mpampiasa rehefa tapitra ny fe-potoana, ary tsy maintsy mandoa amin’ny mpiasa ny zony rehetra, indrindra indrindra ny fampilazana mialoha.
4. Fotoana tsy iasan’ny reny na ny ray, raha marary na miditra hopitaly ny zanany. Tsy maintsy hamarinin’ny dokotera fa ilaina ny fanatrehan’izy ireo, (fotoana izay voafetra ho roa volana).
Afaka manapaka ny fifanekena ny mpampiasa rehefa tapitra ny fe-potoana, ary tsy maintsy mandoa amin’ny mpiasa ny zony rehetra indrindra indrindra ny fampilazana mialoha.
5- Fotoana handraisan’ny mpiasa anjara amin’ny fifaninanam-pirenena, na iraisam-pirenena, na fihaonambe, ka nahazoana fanamarinana avy amin’ny Ministera misahana ny fanatanjahantena na ny fihaonambe isan-tsokajiny.
Tafiditra ao anatin’ny faharetan’ny fihantonan’ny fifanekena : ny fotoana fanomanana, ny fianarana na ny fanofanana ny fifaninanam-pirenena.
Amin’ireo tranga voalaza eo ambony (1,2,3,4,5), mandritra ny fotoana ihantonan’ny fifanarahana, ny mpampiasa dia tsy maintsy mandoa amin’ny mpiasa ny tambiny izay antsoina hoe : “tambim-pihantonana” : karama tsy mihoatra ny iray volana, raha toa ka latsaky ny iray volana ny fotoana fampiomanana mialoha, ary hatramin’ny fetran’ny fampiomanana mialoha amin’ny tranga hafa.
6- Fotoana hiantsoana ny mpiasa hanatanterahiny ny asa maha olom-boafidy , fotoana izay voafetra amin’ny halavan’ny fotoam-panirahana.
7- Fotoana fandefasana ny mpiasa amin’ny fihantonana iombonana noho ny antony teknika (chômage technique) toy ireto antony manaraka ireto :
Fahatapahan’ny hery manosika
Ny loza voa-janahary
Tsy fisiana tsy nahy eo amin’ny akora ilaina, (fotoana izay voafetra ho enim-bolana).
Aorian’io fotoana io dia tapaka avy hatrany ny fifanekena ary tsy maintsy aloan’ny mpampiasa ny zon’ny mpiasa rehetra toy : ny fampilazana mialoha sy ny tambim-pandroahana.
Afaka manapaka ny fifanekena tsy misy fampilazana mialoha aorian’ny telo volana niantonan’ny fifanekena ny mpiasa.
8- Fotoana iatoan’ny asa noho ny loza vokatry ny asa na aretina vokatry ny asa.
9. Fotoana faharetan’ny fahalavam-potoana noho ny fitokonana ara-dalàna.
10. Fotoana fitakiana asa voalazan’ny lalàna manankery.
11. Fotoana faharetan’ny fahalavam-potoana noho ny fitanana am-ponja vonjy maika ny mpiasa izay nahazo famotsorana noho tsy fisian’ny antony hanenjehana azy, na afaka madiodio na koa noho ny fisalasalàna.
Afaka manapaka ny fifanekena ny mpampiasa raha mihoatra ny efatra ambin’ny folo volana ny fitanana am-ponja, nefa tsy maintsy mandoa amin’ny mpiasa ny zony rehetra, isan’izany ny fampiomanana mialoha.